Sea of Hope – Gold Channel Movies
1Season 1 Jun. 29, 2021
Episode 1 Jun. 29, 2021
Episode3Jul. 13, 2021
The Sea I Desire / The Sea of Hope (2021)
Dramaတွေကြည့်ပြီး လောင်လိုက်ရ ကွဲလိုက်ရ ငိုလိုက်ရတွေဖြစ်နေတဲ့ GCပရိသတ်ကြီးကို JTBCက Healing Programလေးတစ်ခုနဲ့ ကုစားပေးလိုက်ပါတယ်။ လူကြိုက်များခဲ့ရတဲ့ Programတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ”Begin Again”နေရာမှာ JTBCက ယခုတစ်ခါ အသစ်တင်ဆက်လာတာကတော့ ”The Sea I Desire”လို့ အမည်ရတဲ့ Variety Showလေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“The Sea I Desire”ဆိုတဲ့ Programလေးဟာ ထူးခြားဆန်းပြားပြီး အံ့ဖွယ်အပြည့်နဲ့ လှပတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို နောက်ခံထားပြီး နာမည်ကြီးcelebritiesတွေပါဝင်တဲ့ Seaside barလေးတစ်ခုမှာ သီချင်းတွေဆိုကြမယ် ဟင်းတွေချက်ကြမယ်… ပါဝင်လာတဲ့ Guestsတွေရဲ့နေ့စဥ်ဘဝအမောတွေပြေပျောက်အောင်လုပ်ပေးမယ် လှပတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ခံစားမယ် ဂီတတွေအတူတူဖန်တီးကြမယ် အရသာရှိတာတွေအတူတူချက်စားကြမယ်… ဒီလိုအဓိပ္ပါယ်တွေအပြည့်နဲ့ ရယ်ရယ်မောမော၊ လှပတဲ့ ဂီတသံစဥ်လေးတွေကိုခံစားရမယ့် ရသစုံရှိုးလေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝင်တင်ဆက်ကြမယ့်သူတွေကတော့ တို့ရဲ့မမ Lee Ji Ahက Barရဲ့ အဓိကစာဖိုမှူးကြီးပေါ့။ Lee Dong Wook ကတော့ Bartenderချောချောလေးပါ။ Kim Go Eunကတော့ ပင်လယ်ချစ်သူကြီးဖြစ်ပြီး Lifeguardတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ထားပါတယ်။ Yoon Jong Shin နဲ့ AKMUက Lee Suhyunတို့ကတော့ ဂီတကို အဓိကဖန်တီးသူတွေအဖြစ်ပါဝင်ထားပြီး SHINeeက Onewကတော့ အချိုပွဲတွေတင်ဆက်ပေးတဲ့ bakerလေးတစ်ယောက်ပါ။
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အထူးGuestကတော့ Blinksတို့ရဲ့ အသည်းကျော်လေး ”Rose” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Roseရဲ့ အသံpowerကတော့ သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်… အသံချိုချိုလေးနဲ့ ဘယ်လိုသီချင်းတွေနဲ့ လူကိုဘယ်လိုတွေ ဖမ်းစားဦးမလဲဆိုပြီး သူမသီဆိုမယ့်သီချင်းတွေကိုလည်း နားထောင်ချင်နေပါပြီ။ နာမည်ကြီးတွေပဲ တင်ဆက်မယ့် အသံတွေလည်းပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းလွန်းကြတဲ့ သူတွေ အတူတူဖန်တီးကြမယ့် ဂီတသံစဥ်တွေကို နားထောင်ပြီး ကုစားပေးမှုကြီးကို GC Teamနဲ့အတူတူ ခံယူလိုက်ကြရအောင်ပါ။
ကဲ…အပတ်စဥ် အင်္ဂါနေ့တိုင်း JTBCက တစ်ပတ်တစ်ပိုင်း ထုတ်လွှင့်မယ့် အပိုင်း၁၀ပိုင်းသာပါရှိတဲ့ ”The Sea I Desire” ဆိုတဲ့ Healing Programလေးကို ကြည့်ရှူပြီး သီချင်းတွေထဲ အတူတူစီးမြောလိုက်ကြရအောင်ပါရှင်။
Translated by Hnin Aye Nyein, Yoon Kyi Phyu, Athena & Faith